Y’oburu imeghe iMac 21 nke inch gi ichoro ihe mmado a | Esi m mac
Ọ bụrụ n ’ị ga-emepe 21-inch nke iMac gị, ị ga-achọ ngwungwu mmado a
Pedro Rodas kwuru | | iMac, Mac kọmputa
Taa anyị na-ejedebe otu ụbọchị na edemede pụrụ iche ma ọ bụ na ụbọchị ole na ole gara aga enwere m obi ụtọ nke inwe ike inye nnukwu ọsọ na iMac site na enyi na-etinye 1TB siri ike draịva n’ime ya. Maka nke a, ekwesịrị m iwepụ ya na ya, yabụ, Achọrọ m nrapado ọhụrụ ka m nwee ike ịhapụ ya n'otu steeti dịka mgbe ewepụrụ ya.
IMacs nke afọ ole na ole gara aga bụ iMacs dị obere karịa nke mere ka njirimara ha dịkwuo mma. Otu n'ime ndozi ahụ bụ ngebichi ya, nke e wuru n'otu mpempe, yabụ iko ejikọtaghị na ndọta.
Iji nwee ike ịnweta ime nke iMac site na 2012 ruo 2015, nke bụ ụdị nke anyị na-ebu ruo taa, ọrụ ntanetị ga-etinye okpomọkụ na nsọtụ ya niile iji mee ka nrapado nke ihuenyo ahụ dị nro . Ozugbo ihuenyo wepụrụ na ihe niile metụtara nke gluu wepụrụ Proceed n’aga idozi ya ma ọ bụ, dịka ọ dị m, ịgbanwe disk ntụgharị maka 1TB Samsung diski siri ike.
Mgbe ịmechara usoro dum nke ịgbanwe disk dị n'ime, ị ga-agharịrị ihuenyo ahụ ọzọ na oge ahụ bụ ebe ị ga-eleba anya n'ihe m na-eweta n'isiokwu a. Nwere ike ịrapara ya na teepu nwere ihu abụọ nke ị ga-edozi ka ọ bụrụ nke kachasị mma, na-eburu n'uche na ọ ga-adị oke mma. Ọtụtụ bụ ọrụ teknụzụ na-eji akara 3M.
Otú ọ dị, dịka m nwere oge, ihe mbụ m mere bụ ịchọ ụgbụ maka ihe nrapado maka iMac 21-inch na mgbe m nwere ihe ahụ n'aka m bụ mgbe m malitere ịgbanwe diski ahụ. Ana m akwado 100% ụzọ a nke gluing ihuenyo ebe ọ bụ na ọ bụ nnọọ nnukwu. Nwere ike ịhụ ha na njikọ ọzọ na ọnụahịa nke 5'45 euro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » Ọ bụrụ n ’ị ga-emepe 21-inch nke iMac gị, ị ga-achọ ngwungwu mmado a
Hugo Diaz kwuru dijo
Ma ọ bụrụ na m nwere 27-anụ ọhịa: /
Zaghachi Hugo Diaz
Ogige Misraim dijo
O di nwute na Mexico enwebeghị m ike ịchọta ọnya ndị ahụ, ọ na-agba m ume ka m nwee ike ịgbanwe usoro DD maka nke siri ike nke iMac 21.5 Mid 2014 1.4Ghz, ebe ọ bụ na site na Sierra, ọ dị m ka ịmalite ịmalite.
Zaghachi Misraim Campos
Pedro Gonzalez ebe obibi oyiyi dijo
Buy zụrụ imac nke ego 2000 ma zụta ihe kachasị mkpa ka akụrụngwa gị ghara ịda na Aliexpress, ị bụ onye amamihe
Zaghachi Pedro Gonzalez
Todoist maka Mac emelitere na imepụta ọhụrụ na mwekota na Kalịnda Google
Usoro Apple Watch 3 nwere ike iji glucose mee ihe iji tụọ glucose